Ezona ndlela zintle zokuFikelela nge-imeyile kuBaphembeleli | Martech Zone
Eyona misebenzi ibalaseleyo yokuSasazeka kwe-imeyile kuBaphembeleli
NgeCawa, uDisemba 13, 2015 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Kuba sibekwa ziingcali zonxibelelwano noluntu mihla le, siya kubona ezona ndawo zintle nezona zibi zokufikelela kwi-imeyile. Sabelane ngaphambili ubhala njani inowuthi efanelekileyo kwaye oku kulandelwa kukulandela okukhulu okubandakanya inkqubela phambili enkulu.
Inyani yile yokuba iinkampani kufuneka zakhe ulwazi kunye negunya lophawu lwabo kwi-intanethi. Ukubhala umxholo akwanelanga, ukukwazi ukufaka umxholo omkhulu kunye nokwabelana ngawo kubaluleke kakhulu kwisicwangciso ngasinye sentengiso. Ungabhatalela unyuselo ngokunjalo, kodwa oko ngekhe kuphuhlise ukukhankanywa kwendalo okuba iinjini zokukhangela ziqwalasele kufutshane.
Ukufikelela kumaziko okuthengisa ajikeleze ekudaleni nasekukhuliseni ubudlelwane obuqhubekayo ngokuzisa amanye amaqela kwi-brand yakho. Nokuba kunyuka nje amajelo eendaba ezentlalo kunye nokuzibandakanya ngaphakathi nohlelo, i-imeyile ihlala yenye yezona ndlela zinamandla zokubandakanya amaqela egama lakho (ukuba yenziwe kakuhle!).
Amanyathelo okuphuhlisa iNkqubo yokuFikelela nge-imeyile
Chaza injongo -Iinjongo zinokubandakanya ukwazisa ngebrand brand, ukuvelisa ukuthengisa, ukukhuthaza ukwabelana ngomxholo (njenge-infographic), ukuphanda, ukubandakanya uluntu, okanye ukwenza intshayelelo.
Ukuchonga abaphulaphuli ekujoliswe kubo -Ujolise kubhlogi, abanini besiza, intatheli, abapapashi bopapasho, izifundiswa, urhulumente, okanye ingeniso?
Uvavanyo, uvavanyo, ukuphinda -Qiniseka ukuba amakhonkco akho ayasebenza, sebenzisa upelo oluchanekileyo, qinisekisa igrama efanelekileyo, kwaye ubhale isandi esinyanzelekileyo nesinyanzelisayo.
le infographic evela kwiNgxelo yeKhosi yeKhosi Uhamba ngayo yonke imithetho eqokelelweyo kwii-imeyile zokufikelela, yintoni esebenzayo, yintoni engasebenziyo, kwaye yintoni ekufuneka uyiphephe Oku kubandakanya ixesha losuku, usuku lweveki, imigca yezihloko, amagama oza kuwasebenzisa, inani lemizamo, ubungakanani bomyalezo, nokunye. Umthetho omnye onomdla owabelwanayo kule infographic yi-blogger yexesha elikhulu ithambekele ekubeni nefuthe elilinganayo le-blogger zexesha elincinci.
tags: Ukufikelela kwibloggerusuku lwevekiImizamo ye-imeyileemail Marketingumyalezo we imeyilei-imeyile yokufikelelaukufundwa kwe-imeyileUvavanyo lwe-imeyileUkufikelela kwintatheliinani lemizamoingxelo yekhosi ekwi-intanethiukufikelelaUkufikelela kweyona misebenzi mihleubungakanani bomyalezo we-imeyileimigca yesifundoixesha losuku
Icandelo loThengiso loCelomngeni kunye namathuba